Xog laga Helay Kulan Dhaxmaray Farmaajo iyo Saraakiil Katirsan Dowladda Itoobiya Warbixin.
Tuesday April 25, 2017 - 19:48:08 in Wararka by Super Admin
Hubanti la'aan ayaa ka taagan natiijada kasoo baxday kulan maalmo ka hor magaalada Baydhabo ku dhaxmaray saraakiil katirsan dowladda Itoobiya iyo Farmaajo hoggaamiyaha dowladda Federaalka.
Kulanka oo uu gar wadeen ka ahaa Shariif Sakiin madaxa maamulka Koonfur galbeed ayaa diiradda lagu saarayay sidii ay isku fahmi lahaayeen Farmaajo iyo dowladda Itoobiya.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyaha waxay sheegayaan in qodobadii kulanka looga hadlay laysku fahmay balse qodobada qaar oo muhiim ahaa lagu kala booday.
Farmaajo iyo dowladda Itoobiya ayaa isku waafaqey in muhiim ay tahay in lasii wado gumeysiga lageliyay Shacabka Soomaaliyeed iyo la dagaallanka Xarakada Al Shabaab balse Itoobiyaanka ayaa ka carooday cadsi Farmaajo ka yimid oo ahaa in dhammaan howlgallada ciidamada Itoobiya la hoos geeyo Villa Somalia!.
Shariif Sakiin oo labada dhinac u dhaxeeyay ayaa soo jeediyay in taliyaasha ciidamada Itoobiya ay sii haystaan xasaanadda ah maamulidda gobollada ay qabsadeen islamarkaana Farmaajo lagu wargeliyo marka ay dhaq dhaqaaqyada sameynayaan.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ayay Itoobiyaanku ka diideen codsigiisi ahaa in aysan mar dambe ka bixin magaalooyin katirsan dalka iyo in howlgalkooda lahoos geeyo Villa Somalia.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Taliyaasha ciidamada Melleteriga Itoobiya ay Farmaajo u sheegeen in wadashaqeynta ay laleeyihiin maamul goboleedyada uu yahay dowladda dhexe ee Addis Ababa ay jaan goysay wixii wax ka bedel ahna iyada uun lagala tashanayo.
Soo Jeedin katimid Shariif Xasan ayuu Farmaajo uga codsaday in uu socdaal ku tago Addis Ababa si khilaafka halkaasi loogusoo gunaanado balse Farmaajo ayaa dalbaday in lasiiyo waqti uu ugasoo fikiro.
Ilo wareedyo kale waxay sheegayaan in Taliyaha ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya uu Farmaajo u sheegay in ciidamadooda aan hoos tagin Howlgalka AMISOM ay kala baxayaan Soomaaliya haddii aan la bixin qarashka ku baxa bil walba.
Itoobiya oo doonaysa in ay cadaadis dhan walba ah saarto Farmaajo ayaa laga yaabaa in ciidamadeedu ay dhaq dhaqaaqyo ka sameeyaan bartamaha dalka Soomaaliya oo ay qabsadaan dhul hor leh ama ay dib uga gurteen dhul kale arrinkaas oo banaanka soo dhigaya in Itoobiyaanku ay yihiin gumeystayaal aan cidna kala tashanayn duullaanka ay dalka kusoo qaadeen.
Khilaafka Farmaajo iyo Itoobiya ma ahan mid sidaas uweyn marka loo eego sida ay uga midaysanyihiin haysashada magaalooyin soomaaliyeed balse waxay isku hayaan oo kaliya dhanka amar qaadashada.
Farmaajo ayaa doonaya in Itoobiya uu umuujiyo hoggaamiye ka duwan madaxdii soo martay dowladda Federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ahaa kuwa umadax raariciya awaamirta xukuumadda Itoobiya, falanqeeyayaasha ayaa rumeysan in hanka Farmaajo uusan meel dheer gaari doonin islamarkaana marka uu Addis Ababa mowqifkiisa labedeli doono.
Sidaas oo ay tahay madaxweynaha dowladda Federaalka ciidamada Itoobiya ee xasuuqa ka wada dalka Soomaaliya wuxuu arkaa walaalo Nabad ilaaliyayaal ah! sida uu ka sheegay munaasabadii caleema saarkiisa ee muqdisho ka dhacday 22,2.2017.
Jeneraal Gabre Taliyaha sirdoonka Itoobiya ee Soomaaliya ayaa lafilayaa in uu Farmaajo markale kulan layeesho uuna kala hadlo khilaafka jira waxayna ubadantahay in Madaxweynaha dowladda Federaalka uu adeeco mudanihiisa Gabre.
Dowladda Itoobiya ayaa tobankii sanadood ee lasoo dhaafay waxay aheyd mid siyaasadeeda ay ka haybaystaan madaxda dabadhilifyada Soomaalida.
Ciidamada ugu badan ee Soomaaliya kusoo duulay ayaa ka socda wadanka Itoobiya waxaana xiga wadamada Uganda iyo Burundi.
Jeneraallada Melleteriga Itoobiya ayaa si toos ah umaamula Gobollada Gedo,Bay iyo Bakool waxayna Itoobiyaanku hadda xusul duub ballaaran ugu jiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada uu maamulo maamulka HirShabelle isku magacaabo ee kajira magaalooyin katirsan Hiiraan iyo Sh.dhexe.
Itoobiya oo ah imbiraadooriyad gumeysi ayaa ku dhaxmilantay siyaasadda Soomaaliya waxayna isku aragtaa dowlad gacanta ku haysa awoodda melleteri ee mandiqadda geeska qaaradda Afrika.